NMN upfu - Mugadziri Fekitori Mutengesi
MUTSVENE une mukana wekupa anti-kukwegura zvigadzirwa-NMN Powder yakawanda neCGMP mutemo uye trackable mhando yekudzora system. Yedu yepakati kugadzirwa kwemwedzi inogona kusvika 1500kg. Kugamuchirwa kuti utaure nesu kuti uwane rumwe ruzivo rwekutenga:
Kuchengeta uye Kubata 2-8 ° C munzvimbo yakaoma
AD NAD + yakakosha coenzyme inodikanwa kune hupenyu uye maseru mashandiro.
♣ Nhanho dzeNAD +, kunyanya fomu yayo yeNAD +, zvinowira pasi nezera mumatumbu mazhinji.
Body Muviri unogadzira NMN sedanho repakati kana "anotungamira" kuNAD +. Taura zvakapusa: mazinga epamusoro eNMN anoreva madanho epamusoro eNAD +.
Yakaziviswa: Pakutevera zvinyorwa, Yakashandiswa NMN pachinzvimbo che β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Nicotinamide Mononucleotide: Zvakanakira uye Zvishandiso
Kukwegura inzira yechisikigo iyo inogona kutora kukuvara pahutano hwako hwepanyama, uye hwekushongedza. Zviratidzo zvekutanga zvekuchembera zvinoonekwa pachiso nepamutsipa dunhu muchimiro chemitsara yakanaka uye makwinya. Zvizorwa zvemhedzisiro yekukwegura kazhinji zvinowedzerwazve nezvakawanda zvinhu zvakaita sekuburitswa kwe UV kunounza ganda rinogadzirwa nemoto pamwe nekushushikana, kushushikana, uye zvinosvibisa zvakatipoteredza izvo zvinovhara pores zvichikonzera kusagadzikana kusingaperi uye acne.
Aya makwinya ndiwo chete maratidziro uye nechokunze anoonekwa chiratidzo chekweguru asi mukati, zvinogona kukanganisa kugona kwako kuita zviitiko zveupenyu hwezuva nezuva nehumwe simba uye nesimba senge pakutanga. Zvakare, kuchembera kunogona kukanganisa huremu hwako uye metabolism, kazhinji zvichikonzera kusava neutano huremu hunobatanidzwa neinononoka basal metabolism chiyero.
Shanduko dzakabatana nekukwegura hadzigone kudzivirirwa kune chikuru chikamu nekuti zvimwe zvacho mhedzisiro yekudzikira kwemitochondrial metabolism uye shanduko mukutaura kwemajini. Mazhinji ekuchinja kwemuviri kunoitika nekukwegura mhedzisiro yekudzikira kweNAD + mazinga, yakakosha coenzyme ye homeostasis uye metabolism inowanikwa mune zvese zvipenyu.
Munguva yehudiki hwedu, iyi coenzyme inotora mune ingangoita yese mitochondrial simba-inogadzira maitiro uye inowanikwa kwazvo mumuviri. Zvisinei, sezvo isu takura, NAD + mazinga anotanga kuderera zvakanyanya.
Anti-kuchembera zvinowedzera zvinokurudzirwa zvakanyanya uye zvinoshandiswa nevanhu pasi rese netarisiro yekurwisa mhedzisiro yekukwegura. Zvisinei, haasi ose anoshanda sezvo mazhinji acho asingakanganise mazinga eNAD + mumuviri. Semhedzisiro yezvidzidzo zvakati wandei. masayendisiti nevanoongorora vakawana mhinduro yekurwisa zviratidzo zvekukwegura, mushonga wehupenyu, kureva, Nicotinamide Mononucleotide iyo mushure mekushandisa kwemuromo inoshanduka ikava NAD + mumuviri.
Nicotinamide Mononucleotide inonzi nucleotide iyo inotorwa kubva niacin kana vhitamini B3 iyo inogona kuwanikwawo, sezvazviri, mune mimwe michero nemiriwo yakadai semakotapeya uye edamame. NMN ichangobva kuwana traction sechinhu chinogona kupokana nekukwegura chinowedzera, zvakanyanya semhedzisiro yekuburitswa kwebhuku, Lifespan, naDavid Sinclair.
NAD + yave ichizivikanwa sechiratidzo chekukwegura kwenguva yakati rebei asi kurwisa mhedzisiro yekukwegura pamatanho ayo kwave kwakaoma. Izvi zvinonyanya nekuti kutanga zvidzidzo kwakanangana nekuwedzera maNAD + mazinga mumuviri uchishandisa NAD + zvinowedzera. Zvisinei, zvakakurumidza kuwanikwa kuti NAD + ine hushoma bioavailability mumuviri zvichireva kuti haisi nyore kupinza, uye kuipedza zvakanyanya hakune chekuita pamatanho ayo endo native.
NMN yekuwedzera ndiyo inotungamira yeNAD + iyo yakakosha mukugadzirwa kwesimba mumuviri wemunhu. Nekudaro, iro rekutanga tsvagiridzo yekushandiswa kweNMN poda kana yekuwedzera seyangangodaro inopesana nekukwegura yekuwedzera yakaitwa chete mugore ra2020. NMN ichine nzira refu yekufamba munyika yekutsvaga asi zvidzidzo zvakaitwa kusvika parizvino zvakaratidza kufungidzira mabhenefiti uye mhedzisiro yeNMN pakukwegura.
NAD + nhanho dzinogona kukwidziridzwa neimwe yevaviri vayo vekutanga, NMN sezvataurwa pamusoro kana NR. NMN neNR zvinofamba pamwe chete, pamwe nekushandurwa kweNMN kuita NR kuchikosha pakuiswa kwekutanga mumuviri. NR inomirira Nicotinamide riboside iyo inogona kuwedzera endogenous NAD + nhanho zvakanyanya. Kuwedzeredzwa neNR kurwisa mhedzisiro yekukwegura zvakanyatsodzidziswa neNR zvinowedzera zvichizivikanwa se 'zvakachengeteka uye zvinoshivirirwa' zvinowedzera.
NMN Inoshanda Sei Pamuviri?
NMN inoita basa rakakosha mukugadzirwa kwesimba uye kugadzirisa kweDNA mumuviri, kunyangwe zvisina kunangana. NMN inokurudzira kusangana kana kugadzirwa kweNAD + mumuviri kuti ikunde kushomeka kwayo, kuburikidza nenzira yekununura. NAD + inogona kugadzirwa munzira dzinopfuura imwe uye nzira yekununura inoenderana nekushanda kwakakodzera kweNMN. Salvage nzira inoreva nzira inogadzira NAD + nemagumo-zvigadzirwa zveNAD + kuparara senge niacinamide kana NAM. NAM inoshandura yakananga kuNMN iyo iyo, kuburikidza nematanho akasiyana, inogadzira NAD +. Iri ndiro rakakosha basa reNMN mumuviri uye ndicho chikonzero chikuru shure kweNMN inowedzera 'kuwedzera kukurumbira.
Ukangotora zvinowedzera zveNMN nemuromo, zvinofungidzirwa kuti zvinoshandurwa kuita NR mumuviri nekuti iyo NMN komputa haigone kupfuura nemumatumbo, kupinda mumasero. Mushure mekunge NR yapinda muchitokisi, inozodzokerwa kuNMN kuburikidza nemhedzisiro yeimwe enzyme; nicotinamide ribose kinase kana NRK. Iyi NMN inozoenda nenzira yekununura yebiosynthesis yeNAD + kuzadza mazinga ekupedzisira mumuviri wemunhu.
Izvo zvakakosha kuti uzive pano kuti kudzoreredzwa kweNAD + kuburikidza neNMN yekuwedzera hakuiti kungo wedzera simba asi zvakare kune zvimwe zvakanakira hutano zvinongowedzera kukwezva kweNMN yekuwedzera.
NMN Hutano Kubatsirwa
Nzvimbo dzeNMN dzinopesana nekukwegura hadzisi chete mhedzisiro yekuwedzera kweNAD + nhanho asiwo mhedzisiro yenzira dzeNMN nemabasa mumuviri wemunhu. Kubatsira kukuru kweNMN kuchiri kugona kwayo kuwedzera masimba esimba uye epanyama sezvo iri iyo NAD + booster zvakadaro, mamwe mabhenefiti haafanire kufuratirwa kunyanya kana iwe uri kutarisa kuti NMN yekuwedzera ndiyo sarudzo chaiyo kwauri.
Kuve NAD + booster inobvumira NMN kuburitsa akati wandei mamwe mabhenefiti ehutano, akadai se:
· Kutungamira kwekufutisa
Iko kuitika kwekufutisa kwakawedzera zvakanyanya kubvira makore makumi matatu apfuura, nehuhwandu hwehudiki hwehuwandu hunenge zvakapetwa pamusoro pemakore makumi matatu aya. Izvi zvinonyanya kunetsa nekuti kufutisa kunokufungidzira kune mamwe ma comorbidities anogona kuuraya. Iyo yakaderera basal metabolic rate ndicho chikonzero chikuru chekushushikana zvine chekuita nezera chinowanzoonekwa kune vanhu vakwegura. Kudzora iyi yakasarudzika mhando yekufutisa kunoda kuita kwakawanda kuita iyo inotarisana nenzara mahormone pamwe neiyo metabolic mitengo. Chidzidzo chakaitwa muQatar chakawana kuti NMN yekuwedzera mune mhando dzemhuka zvakakonzera kuwedzera kutaura kwemajini emahormone maviri akakosha mukudya kudzvinyirira uye kuongorora kwemetabolism; leptin uye sirtuin, zvichiteerana. Ichi chidzidzo chinoratidza kuti kunwisa kwemuromo kweNMN kunogona kudzvinyirira nzara kuti ikubatsire kurasikirwa nehuremu uye zvakare kuwedzera metabolism chiyero, zvese zviri zviviri zvinowedzeredza kurasikirwa kwekurema kwaungasangana nako.
Uyezve, vaongorori vakaona kuti NMN inowedzera NAD + nhanho idzo mumafuta maseru ine metabolism-inosimudzira mhedzisiro, ichiwedzera kubatsira kuonda.
· Chirwere cheshuga
Chirwere cheshuga ndechimwe chezvinetso zvekufutisa uye kushandisa NMN zvinowedzera kubata nekurapa kufutisa kunogona kudzivirira chirwere cheshuga kubva mukukura. Asi handiyo yega mhedzisiro yeNMN pamazinga eshuga eropa. Kupera kweNAD + nhanho dzakawanikwa dzakabatana nekuderera kwekushanda kwemasero e beta mupancreas, sosi huru ye insulin mumuviri. Vatsvagiri vanofunga kuti iyi ndiyo nzira huru yekurapa chirwere cheshuga mellitus type 2 muvanhu vakuru.
Chidzidzo chakaitwa pamhando dzemhuka chakaratidza kuti chirwere cheshuga uye mbeva dzakura, pachinopihwa NMN zvinowedzera, zvakagadzirisa beta-cell basa sezvo ichizadza zvitoro zveNAD + mumuviri. Chimwe chidzidzo chakanangana nekutsvaga tarisiro yekurapa kweanosanganisirwa nezera uye kufutisa-ane hukama neshuga mellitus mhando 2 akawana kuti NMN zvinowedzera zvine mukana wekukanganisa chiropa uye kuwedzera mafuta oxidation. Ivo vanogona zvakare kudzikisa kuchengetera kwemafuta mumuviri ukuwo vachiwedzera kushivirira kweglucose mumuviri.
NMN zvinowedzera zvine nzira dzinoverengeka kuburikidza dzavanobatsira kugadzirisa glucose shiviriro uye insulin kudzvinyirira, nokudaro zvichibatsira kubata chirwere cheshuga mellitus mhando 2 muvanhu vakwegura. Nzira dzakafanana dzinoshandiswa kudzikisira zviratidzo zvehumwe hutachiona hwehutachiona hunokura panguva yekukwegura.
· Kuwedzera Basa reImune System
Tichifunga kuti kuwedzererwa neNMN chete nguva pfupi yadarika yakava sarudzo inoshanda yakaongororwa, zvirinani pane mhando dzemhuka, hazvishamise kuti iro basa reNMN rakadzidzwa maererano nehutachiona hweCOVID-19.
Ndichiri kudzidza nezve akasiyana mabasa e multitasking coenzyme, NAD +, vaongorori vakaona kuti inoitawo basa rakakosha mukushanda chaiko kwema immune system. Iyo yazvino COVID-19 denda yakasunda vaongorori kuti vaongorore hukama chaihwo pakati peNMN zvinowedzera, yakawedzera NAD +, uye yakawedzera immune immune kurwisa zvinoitika zvehutachiona.
Imwe yedzidzo dzakadai yakawana iyo yakadzikira NAD + nhanho uye zvichidaro, kuwedzera zera, zvichikonzera mafomu akakomba ehutachiona. Zvakawanikwa zvakare kuti varwere ava vaive panjodzi huru yekukonzeresa uye kufa nekuda kwehutachiona hweCOVID-19. Nekuda kweizvi zviwanikwa, zvinogona kufungidzirwa kuti kuwedzera kweNMN kunogona kudzikisira kuomarara uko COVID-19 inokanganisa immune system nemuviri wemunhu.
· Kuvandudzwa Kwevakadzi Kubereka
Vakadzi vanokanganiswa neiyo wachi wachi iyo inoganhurira kugona kwavo kubereka nezera. Zvidzidzo zvakasiyana zvinoitwa pamhando dzemhuka dzechikadzi dzakaona kuti NMN yekuwedzera inogona kudzikamisa iyi miganho uye kunyangwe kurapa kushaya mbereko-zera mune zvimwe zviitiko.
Chidzidzo chakaitwa pamhando dzakasarudzika, mbeva dzechikadzi dzakaona kuti kupera kweNAD + mazinga kunogona kukonzera kudzikira kweoocyte mhando pamwe nekuderera kukuru kwenhamba dzeoocyte, izvo zvinokonzeresa kugona kubereka uye kubereka. Kudzoreredza iyo NAD + nhanho mune idzi mhando dzemhuka neNMN yekuwedzera yakawanikwa ichiwedzera mhando yeoocyte nenhamba dzayo, nekudaro ichivandudza kugona kubereka.
Chimwe chidzidzo chakaitwa kuti chiongorore chaizvo izvo zvinoderedza kunaka kwemaoocyte nezera. Pachidzidzo ichi, maoocyte kubva kuvakadzi vakuru akaunganidzwa uye akadzidzwa, zvakadzama kuti anzwisise pathophysiology. Vatsvagiri vakaona kuti kudzikira kweoocyte mhando yaive mhedzisiro yekuchinja poindi mu mitochondrial DNA yeoocyte, inokura nekuda kwekusaenzana kweNAD + nhanho. Ichi chikonzero nei NMN yekuwedzera kuwedzera mazinga eNAD + anotendwa kunatsiridza kubereka uye hutano hwekubereka, kunyanya mumadzimai akura.
Sezvo vakadzi vakura vachirasikirwa nehunyanzvi hwekubereka panguva yekuguma kuenda kumwedzi, zvinowedzera zveNMN, pamwe nekugona kuvandudza hutano hwekubereka zvinogona zvakare kudzosera kubereka, kusvika padanho. Izvi zvinobvumidza vakadzi kuti vabereke kwenguva yakareba uye vave nehunhu hwepamusoro hwemaoocyte kunyangwe mushure mekunge vayambuka muganhu wezera rese.
· Kuwedzera kweropa kuyerera
Zvinoenderana nekutsvagisa kwakaitwa naDr DAvid Sinclair, nyanzvi yezvinhu zvipenyu inoona nezve mukurumbira weNMN zvinowedzera, patinokwegura, masero endothelial anonamira mitsipa yedu yeropa anoderera muhuwandu uye mhando. Izvi zvinobva zvabata zvinovaka muviri izvo zviri kubva muropa zvichienda kumatishu ayo nhumbi dzinopfuura nadzo, nekudaro zvinokanganisa hunhu hwese hweropa. Shanduko idzi dzinofungidzirwa kuti ndicho chinhu chikuru chakakonzera kuwedzera kweropa remidziyo yezvirwere pakati pevanhu vakura.
NMN yekuwedzera kana yekuwedzera yeNR kunoguma nekuwedzera kweNAD + mazinga, ayo zvinoenderana nechidzidzo ichi anokonzeresa masero endothelial kuti ave anoshanda uye akasimba kuburitsa tsinga dzeropa idzva kana tsaru dzamira kushanda nemazvo.
· Kuvandudzwa Kwekuziva Basa
Matambudziko eNeurodegenerative matambudziko akajairika anokanganisa huropi, kudzikira kwekuziva kwekuita uye hupenyu hwehupenyu. Kuwedzeredzwa neNMN kuwedzera mazinga eNAD + anotendwa kuti anoshanda zvakanyanya mukuvandudza mashandiro ekuziva uye nekusimudzira kupona kwemaseru ehuropi.
Mune chidzidzo apo mhando dzemhuka dzine njodzi yekukuvara kwehuropi uye neurodegeneration dzakapihwa chakakomberedzwa, P7C3-A20, zvakaonekwa kuti iyi komponi yakavandudza mashandiro uye ikamisa iyo neurodegenerative maitiro.
P7C3-A20 inhengo inogadzira NMN iyo inoburitsa NAD +. Kupa mbeva pamwe neTII iyi komponi yakawanikwa isina kungova neruzivo rwekuziva chete asi yakawanikwa ichiwedzera kushanda uye kurongeka kwekutenderera kweropa-huropi, sezvo chikamu ichi chiri chikamu chemembure.
· Yakagadziridzwa Tsandanyama Basa uye Kuwedzera Kutsungirira
Vatambi vangade kusimudzira kugona kwavo kutsungirira vanofanirwa kutora zvinowedzera zveNMN sezvazvakawanikwa munguva pfupi yapfuura kuti izvi zvinowedzera zvine mukana wekuvandudza yavo aerobic kugona. Iyi bhenefiti yeNMN inowedzera inonyanya kukonzerwa nesimba rekugadzira simba reNAD ​​+ mumhasuru, asi zvakakosha kuti uzive kuti vatambi ava vanowanawo kuwedzera kwakakura mumhasuru yavo yekutora nhanho.
Ini ndinofanira kutora NMN Powder?
NMN Powder ine akati wandei mabhenefiti akave akadzidzwa zvakadzama, mumhando dzemhuka uye murabhoritari. Mamwe mabhenefiti aya akaongororwa muvanhu, uye akaunza zvibereko zvakanaka. Kana iwe uri kutanga kuona zviratidzo zvekukwegura kungave kuri muchimiro chekudzikira kutsungirira, kugona kwemitambo, kana zviratidzo zvekuzora, iwe unogona kubatsirwa nekutora NMN zvinowedzera. Kushandiswa kwavo kunonyanya kukurudzirwa kune avo vari kuyedza kudzosera zviratidzo zvekukwegura.
NMN Zvinogona Kuitika
NMN chinhu chinowanikwa mumuviri wemunhu, kuti mushure mekutsvagisa nekuwongorora kwakawanikwa kusisina njodzi kana matambudziko anosangana nazvo. NMN, kana yagadzirwa nemazvo nemupi weNMN uye ikachengetwa mushe muNMN fekitori yeupfu uye nemusha wako, yakachengeteka zvachose kudyiwa nevanhu. Iko kuchengetwa kweNMN upfu kwakakosha nekuti kana ikachengetwa munzvimbo inopisa, inozoshanduka kuita niacinamide uye yotanga kuisa chepfu mumuviri wako zvishoma nezvishoma paunenge uchidya.
Iwe haufanire kunetseka seyakachena NMN upfu nekambani yeNMN inogara yakachengetwa zvakakodzera, munzvimbo inotonhora uye yakaoma. Zvakare, vagadziri veNMN poda vanodhinda iwo chaiwo madhairekisheni ekushandisa uye kuchengetedza pane kurongedza kwezvokuwedzera kuitira kuti iwe uzive maitiro ekushandisa zvakanaka, pasina kukonzera kunetsekana kwakanyanya.
Izvo zvakare zvakakosha kuti uzive kuti kugara uchishandiswa kweNMN zvinowedzeredza zvinogona kukonzeresa kudzikira kwesimba rezvinowedzera kuti ubudise zvaunoda. Nechikonzero ichi, zvinokurudzirwa kuti utore zororo kubva kune zvinowedzera kana iwe ukatanga kucherechedza zvakadzikira NMN mabhenefiti senge kudzikiswa kwemhando yekurara uye kuwanda kwehutachiona.
Sekureva kwekuchengetwa kwakakodzera kunoitwa panguva yekugadzira uye yekuchengetedza, zvese kumba uye kufekitori, hapana njodzi uye mhedzisiro inosanganisirwa nekushandisa kweNMN.
Kupi Kwekutenga Yakanakisa NMN Powder?
Iwe unogona kutenga NMN upfu uye mamwe mafomu eNMN anowedzera kubva kumaindasitiri epamhepo, zvitoro zvehutano, uye vamwe vavo vemuno. Iwe unogona zvakare kutenga NMN yeupfu hombodo mabhegi ayo ane huwandu hwakawanda hweNMN upfu, kunyangwe iri yegiredhi giredhi uye inowanzo kutengwa nemakambani makuru kuyedza kugadzira mapiritsi eNMN uye macapsule.
Iwe unogona zvakare kutenga NMN poda kubva kuAmazon kana Amazon Prime, asi iwe unofanirwa kuve wakangwarira kutenga chaicho chigadzirwa kubva kune vakavimbiswa vatengesi sevazhinji vatengesi vatengesi vangakunyengerere iwe kuti ubhadhare hombe hombe yedhipi kana yekunyepedzera, izvo zvingave zvisina zvazvinoita hutano hwako kana hunokanganisa hutano hwako.
Usati watanga kutenga yeiyo NMN powder, unofanirwa kutarisa zvinhu zvishoma kuti uve nechokwadi chekuti uri kutenga chigadzirwa chakanakira iwe.
Iyo yakanakisa yeNMN yekuwedzera ndeye iyo inogadzirwa neese ekuchengetedza mirawo uye maprotocol ari munzvimbo. Vatengesi veNMN vanofanirwa kuona kuti kukoshesa kwakanyanya kunopihwa kudzivirira kusvibiswa kweNMN upfu nechero chepfu kana zvinosvibisa zvinogona kukuvadza kupfuura kunaka kumuviri wemunhu.
Zvakare, iyo NMN poda inofanirwa kuve, sezvakataurwa pamusoro, inofanirwa kuchengetwa mune yakakodzera mamiriro ayo anofanirwawo kuchengetedzwa panguva yekufambisa kweanowedzera.
FAQ Nezve NMN Powder
· Inogona here NMN poda kudzosera kukwegura?
NMN upfu inoshambadzirwa kuve inorwisa-kukwegura yekuwedzera uye nenzira kwayo, sezvo ichiwedzera iwo mazinga eNAD + ayo anoita basa rakakosha mukuderedza masimba ako ezera paunenge uchikwegura. Kwete izvozvo chete, NMN upfu hunogona kushandura mhedzisiro yekukwegura pane akasiyana masisitimu emuviri wako, uye ndokudzosera iwe kumazuva ako ehudiki, ane simba.
· Iko NMN poda Yakachengeteka here?
NMN poda yakanyatso tsvagisirwa kuti iongorore akasiyana mabasa uye mabhenefiti ayo kushandiswa kungave nawo pamuviri wemunhu. Munguva yezvidzidzo izvi, zvinokonzeresa mhedzisiro zvakaongororwawo chete kuti mhedzisiro iratidze kuti kushandiswa kweNMN hakuna mhedzisiro inosangana nayo. Chero chinetso chinogona kuitika neNMN kushandiswa kwehupfu mhedzisiro yechikanganiso chemunhu kana chekunyora chakaitwa panguva yekufambisa kana yekuchengetedza. Hapana chimwe chazvo chine chekuita nechinhu chaicho cheye anti-kuchembera chinowedzera.
· Yakawanda sei iyo NMN poda inodhura?
NMN powder inowanikwa zvirinyore uye inodhura inowedzera asi inoonekwa seinokosha, ichipiwa runyorwa rayo rukuru rwezvakaratidzwa nesainzi mabhenefiti. Mutengo wepamusoro weNMN upfu hauna kukonzerwa nerunyorwa rurefu rwezvakanakira asi asi mhedzisiro yeiyo yakakura nzira yekugadzira iyo iyo pachayo inodhura kune vazhinji veNMN vagadziri. Tichifunga nezve inodhura hunhu hweyekuwedzera, iwe unofanirwa kugara uchiona kuti uri kutenga chaicho chigadzirwa kubva kune vanozivikanwa vatengesi, kunyanya kana iwe uri kutenga NMN online.
NMN zvinowedzera zviri kuwedzera kufarirwa nezuva, nekuda kwebasa reiyo biologist David Sinclair uyo akashandisawo chikamu chakakura chezvaari kuita basa rekutsvagisa nekudzidza mhedzisiro yeiyo vhitamini B3-yakatorwa nucleotide.
NMN inotungamira yeNAD + inova coenzyme inodikanwa kuti ishandiswe zvakanaka nzira dzinoverengeka dzemagetsi, immune, uye mahormone. Basa hombe reNAD ​​+ ibasa rairi kuita mukugadzirwa kwesimba. Sezvo NAD + yakakosha mukugadzirwa kwesimba, kuderera kwemuviri mumatanho ayo sezera rimwe chete kunokonzeresa kuderedzwa kwesimba remagetsi. NMN yekuwedzera inogona kubatsira kuwedzera simba nekusimudzira NAD + nhanho mumuviri.
NMN inewo mamwe mabhenefiti akati wandei sekuvandudza mashandiro emagetsi, kusimudzira moyo, kuziva, kutenderera, uye immune system mashandiro. Aya mabasa anotsigirwa nehuchapupu hwesainzi uye data, iyo inodaidzira kushandiswa kwakapararira kweNMN kuwedzera kune vanhu vakura kuvabatsira nguva yekudzokera kumazuva avo ehudiki.
Kunze kwemabhenefiti akati wandei eNMN, kufarirwa kwayo kunogona kupihwa mbiri yekuti haina njodzi dzakakomba kana matambudziko anosangana nekushandisa kwayo. Kana iwe uchinzwa zera rako richikusvikira iwe uye uchida chinwiwa kubva patsime rehudiki, NMN zvinowedzera zvinogona kunge iri sarudzo yakanakira iwe.
 Tarragó MG, Chini CC, Kanamori KS, Warner GM, Caride A, de Oliveira GC, et al. (Chivabvu 2018). "+ Derera". Cell Metabolism. 27 (5): 1081-1095.e10. doi: 10.1016 / j.cmet.2018.03.016. PMC 5935140. PMID 29719225.
 Cambronne XA, Kraus WL (Gumiguru 2020). "+ Synthesis uye Mabasa muMammalian Masero". Maitiro mu Biochemical Sayenzi. 45 (10): 858-873. doi: 10.1016 / j.tibs.2020.05.010. PMC 7502477. PMID 32595066.
 Bogan KL, Brenner C (2008). "Nicotinic acid, nicotinamide, uye nicotinamide riboside: kuongororwa kwema molecular kweNAD + preursor mavitamini muhutano hwevanhu". Ongororo yegore negore yeNutrition. 28: 115-30. doi: 10.1146 / annurev.nutr.28.061807.155443. PMID 18429699.
 Yue Yang, Anthony A. Sauve. NAD + metabolism: Bioenergetics, kuisa chiratidzo uye kurapa kwekurapa. Biochim Biophys Acta, 2016; DOI: 10.1016 / j.bbapap.2016.06.014.
 Mills KF, Yoshida S, Stein LR, Grozio A, Kubota S, Sasaki Y, Redpath P, Migaud ME, Apte RS, Uchida K, Yoshino J, Imai SI. Yenguva Yakareba Kutungamira kweNicotinamide Mononucleotide Inogonesa Zera-Yakabatana Physiological Kupera muMakonzo. Cell Metab, 2016; DOI: 10.1016 / j.cmet.2016.09.013.
 Niels J. Connell, Riekelt H. Houtkooper, Patrick Schrauwen. NAD + metabolism sechinangwa chehutano hwemagetsi: tawana here sirivheri bara? Chirwere cheshuga, 2019; DOI: 10.1007 / s00125-019-4831-3.
 Ann Katrin-Hopp, Patrick Grüter, Michael O. Hottiger. Mutemo weGlucose Metabolism neNAD + uye ADP-Ribosylation. Masero, 2019; DOI: 10.3390 / masero8080890.
 Shuang Zhou, Xiaoqiang Tang, Hou-Zao Chen. Sirtuins uye Insulin Kuramba. Kumberi Endocrinol (Lausanne), 2018; DOI: 10.3389 / fendo.2018.00748.